Sida Loogu Sameeyo Muuqaalo Cajiib Ah Sheekooyinka Instagram | Martech Zone
Instagram waxay leedahay in kabadan 500 milyan oo isticmaaleyaal firfircoon maalin kasta, taas oo macnaheedu yahay ugu yaraan kalabar guud ahaan isticmaalaha guud ee muuqaalka Instagram ama abuuro sheekooyin maalin kasta. Sheekooyinka Instagram waxay ka mid yihiin siyaabaha ugu wanaagsan ee aad ugu adeegsan karto inaad kula xiriirto dhagaystayaasha aad bartilmaameedsato sababo la xiriira astaamaheeda cajiibka ah ee weligood isbeddelaya. Marka loo eego tirakoobyada, boqolkiiba 68 ee millennials-yada waxay yiraahdaan waxay daawadaan sheekooyinka Instagram.
Iyada oo tirada badan ee isticmaaleyaashu ay raacaan asxaabta, dadka caanka ah, iyo ganacsiga, waxaan u qaadan karnaa in isticmaaleyaal badani ay cunayaan waxyaabo badan oo ganacsi iyo wax kasta oo kale oo ay soo bandhigto barxadda. Si aad isugu xirto oo aad u soo jiidato dhagaystayaashaada, waxaad u baahan tahay abuur sheekooyin soo jiidasho leh Instagram muuqaal ahaan taagan. Halkan waxaa ah siddeed talooyin naqshadeyn ah oo kaa caawin kara inaad abuurto xiiso badan, muuqaal muuqaal leh, iyo soo jiidasho Sheekooyinka Instagram.
Adeegso Sawirada Animated
Sida laga soo xigtay tirakoobyada, fiidiyowyada fiidiyowga ayaa sida caadiga ah hela 38 boqolkiiba kaqeybgal badan marka la barbar dhigo sawirrada muuqaalka Sidaa darteed, haddii aad ku guuldareysato inaad soo jiito dhageystayaashaada afarta ilbiriqsi ee ugu horreysa ee daawashada, waxaad gebi ahaanba waayi kartaa xiisahooda. Ku darida animation sawiradaada waa mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee loogu daro dhaqdhaqaaqa oo ay u ilaaliyaan daawadayaashaadu.
Si kastaba ha noqotee, haddii aadan haysan nuxurka fiidiyowga, waxaad ku dari kartaa animation sawirradaada ama waxaad abuuri kartaa animation gooni ah. Instagram waxaa ku jira xoogaa qalab hidi ah oo aad isticmaali karto, sida galaaska aan xadidneyn ee GIF ama heesaha firfircoon. Intaas waxaa sii dheer, waxaad sidoo kale isticmaali kartaa dhinac saddexaad Qalabka Instagram natiijooyinka ugu fiican warbaahinta bulshada.
Abuur Sheeko Sheeko
Waxaad u isticmaali kartaa Sheekooyinka Instagram siyaabo badan oo kala duwan. Laga soo bilaabo wadaagida astaamaha cusub si kor loogu qaado qoraaladaada cusub, sheekooyinkaani waxay ku siinayaan qaab aan caadi aheyn oo aad kula macaamili karto suuqaaga bartilmaameedka adigoon u nadiifin sida quudintaada. Taasi waxay ka dhigan tahay inaad qaadan karto muuqaalo daaha gadaashiisa ah, sawiro casri ah, iyo fiidiyowyo toos ah adigoon ka walwalin inay ku buuxinayaan waxyaabaha kale ee aad haysato. Si kastaba ha noqotee, markay tahay shaxanka sheekooyinkaaga 'Instagram', waxaad u baahan tahay inaad hubiso inaad abuurayso naqshado muuqaal soo jiidasho leh oo soo jiidan kara daawadayaashaada si ay ula jaanqaadaan. Mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee lagu gaari karo taas waa iyadoo la adeegsanayo sheeko si loo qorsheeyo sheekooyinkaaga ka hor intaadan bilaabin on naqshadda.
Sheeko-xayeysiintu waxay kaa caawineysaa inaad qorsheyso waxyaabaha ku habboon ee aad ku dhajin karto oo aad u abaabuli karto waxyaabaha sida aad jeceshahay in loo soo bandhigo. Taasi waxay kaa caawinaysaa hubinta in sheekadaada 'Instagram' ay si habsami leh u socoto oo ay daawadayaashaada ku mashquuliso. Sheeko xayeysiintu sidoo kale waa lama huraan haddii aad inta badan dul dhigto qoraalka sheekooyinkaaga maxaa yeelay waxay hubineysaa in sheekooyinkaagu ay ahaadaan kuwo isku xiran.
Ku dar sawir
Sheekadaada 'Instagram' uma baahna inay ka koobnaato naqshadaha qaabdhismeedka qaabdhismeedka kaliya. Waad beddeli kartaa iyaga oo ku dari kartaa sawir mararka qaarkood. Waxa ugu fiican ee ku saabsan sheekooyinka Instagram ayaa ah in wax kasta oo aad daabacdo aysan ahayn in si xirfadaysan loo abuuro ama tayo sare leh. Taabadalkeed, waxaad u isticmaali kartaa kamaradda casrigaaga inaad ku qabato qaar ka mid ah sawirrada gadaasha dambe ee arjiga. Intaas waxaa sii dheer, waxaa jira malaayiin ikhtiyaarro sawir-qaadis oo bilaash ah oo la heli karo si aad u isticmaasho sidoo kale. Kaliya waxaad ubaahantahay inaad doorato sawirada u dhigma waxyaabaha aad wadaagayso oo khuseeya shirkadaada ama astaantaada.
Adeegso Midabbadaada Calaamadda iyo Faraha
Markaad suuqgeyneyso shirkaddaada ama alaabadaada, waxaad u baahan tahay inaad ku hayso wax kasta oo aad ku horumariso astaanta, oo ay ku jiraan sheekooyinkaaga 'Instagram'. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay inaad haysato a xirmada summada oo dhameystiran diyaar marwalba inaad raacdo astaantaada, astaamaha, iyo hex codes-kaaga, iyo waxyaabo kale. Oo ay ku jiraan midabadaada astaanta ah iyo farbarashadaadu waxay wax badan ka caawisaa aqoonsiga astaanta, gaar ahaan markay dhagaystayaashaadu ku dhex wareegaan sheekooyinka. Ku dhagashada midab gaar ah midabada dhammaan sheekooyinkaaga Instagram waxay muhiim u tahay kobcinta xusuusta sumcadda. Iyadoo aan loo eegin inaad dhiseysid sumcad shaqsiyeed, ama ganacsi leedahay, in midabkaaga midabkiisu sii socdo waa furaha. U adeegso jaantuska midabka si xikmad leh oo xirfad leh si aad u xoojiso muuqaalka sawirrada sheekooyinkaaga 'Instagram'. Marka daawadayaashaadu arkaan sawiradaada, waxay si otomaatig ah u ogaan karaan inay iska leedahay ururkaaga iyagoon xitaa arkin magacaaga isticmaale.
Kudar Hooska Qoraalka
Waxaad ubaahantahay inaad ku kasbato hal abuur naqshadeynta app-ka ee ay bixiso Instagram si aad ugu abuurto muuqaalo soo jiidasho leh dhamaan sheekooyinkaaga Instagram. Waxaad ku dari kartaa hooska qoraalka dashboardka sheeko xariir adigoo ku daraya laba lakab oo midabbo kala duwan ah isla qoraalka. Waad ku guuleysan kartaa taas adoo ku qoraya qoraalkaaga hooska madow ama fudud ka dibna ku dheji dusha korkiisa adoo adeegsanaya xagal yar. Tilmaamahani waa hab xiiso leh oo loogu daro qoraal dusha sare ee fiidiyow ama sawir aad ku qabato dalabka, taas oo ka dhigaysa mid fudud oo dhakhso leh abuurista sheekadaada Instagram ka hor intaadan daabicin.
Abuur Dusha sare iyo Astaamo
Qalabka sawirada ee uu bixiyo barnaamijka Instagram wuxuu sameyn karaa wax ka badan muujinta iyo midabaynta qoraalka sheekadaada. Qalabkan gaarka ah ayaa sidoo kale kaa caawin kara inaad sameysid midabyo isku dhafan iyo sooyaal kor u qaada muuqaalka sheekooyinkaaga. Haddii aad qorsheyneyso inaad la wadaagto ogeysiisyo muhiim ah sheekadaada 'Instagram' adiga oo aan helin sawir aad adeegsato, waad furi kartaa qalabka qalinka, waxaad heli kartaa midabka asalka ah ee aad rabto ka dibna riix oo ku hay illaa shaashadda oo dhan ay u rogayso midabkaas.
Intaas waxaa sii dheer, waxaad abuuri kartaa midab dhalaalaya oo midab dhalaalaya adoo u adeegsanaya aaladda iftiiminta isla habkaas. Waxa kale oo aad abuuri kartaa xoogaa dhuumaaleysi ah adigoo ku daraya midab asalka dusha sare ee sawiradaada isla markaana aad u dhaqaajineyso qalabka masixi si aad u baabi'iso qaar ka mid ah midabada oo aad u wanaajiso sawiradaada. Haddii aad u baahan tahay sooyaal xirfadeed iyo is-dul-saar xirfad leh waxaad la tashan kartaa dhisayaasha degellada internet-ka kuwaasoo kuu samayn kara adiga. Waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan iyaga halkan, haddii aadan ku kalsoonayn inaad adigu sameyso.
Adeegso GIF-yada iyo Istiikarada
Sheekooyinka Instagram waxay ku siinayaan istiikarada badan oo kala duwan iyo xulashooyinka GIF si aad ugu keento dareen nashqadeyn iyo qosol nashqadahaaga. Waxaad ka raadin kartaa wax qaas ah ama ku dhex wareeji xulashooyinka kala duwan si aad ugu darto sheekooyinkaaga 'Instagram'. Waxaa jira qaabab qaabab astaan ​​ah, waxaad kaloo ku dari kartaa istiikarada ishtag, Q & As, su'aalaha, iyo codbixinta si kor loogu qaado muuqaalka muuqaalkaaga oo dhagaystayaashaada loo mashquuliyo. Waxaad sidoo kale abuuri kartaa oo aad soo gudbin kartaa GIF-yadaada iyo istiikarkaaga daawadayaasha si loogu daro sheekooyinkooda ama aad si fudud ugu heli karto astaantaada.
Abuuritaanka sheekooyinka hal-abuurka iyo muuqaalka leh ee Instagram-ka ayaa qayb muhiim ah ka ah ganacsigaaga ama sumcaddaada shaqsiyeed. Haddii aad tahay sawirqaade, sawir qaade, sawir qaade, ama ganacsade ganacsi yar, abuurista sheekooyin qurux badan oo heer sare ah oo Instagram ah ayaa kaa caawin kara inaad ku faafiso farriinta xirfadahaaga aan fiicnayn oo aad u muujiso shaqadaada dhagaystayaal aad u tiro badan. Tilmaamaha kor lagu gorfeeyey waxay kaa caawin karaan inaad abuurto muuqaallo tayo sare leh oo soo jiidan doona daawadayaashaada dhammaan sheekooyinkaaga 'Instagram'.
Tags: firfircoonaanta gifgifs firfircoonGifsiyadatalooyinka suuqgeynta instagramSheekooyinka instagramsooyaal sheeko instagramcalaamadeynta sheekada instagramfarriimaha sheekada ee instagramDulucda sheekada Instagramsawir sheeko instagram ahdhajinta sheekada instagramhooska qoraalka sheekada instagramsheeko xariir instagram ahstoryboardsawirada
Jooji Cusbooneysiinta Sannadaha Ganacsiga ee Boggaaga WordPress oo leh shaxdan gaaban